Dhibaatooyinka Dareemka Dhibaatada Dareemka ah ee Dhexdhexaad ah Du Marketing Vidéo
Qaar ka mid ah waxay ku xiran yihiin inay ku xiraan bogga intarnetka ee shabakadaha internetka iyo saxaafada. Xirfadlayaasha xirfadlayaasha (SEO) waxay tixgelinayaan sirta aduunka ee ku aadan in ay ka mid noqdaan macaamiisha ku haboon in la dhimo hay'adaha ururka. Intaa waxaa dheer, oo si toos ah u diri kartaa si aad u soo saartaan si aad u soo saartaan si aad u firfircoon. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan macaamiisha aad u baahan tahay - home temperature monitoring system internet. Ka dibna waxaa loo yaqaan 'Marketing Act' oo ah saameyn ku yeelashada wax qabadka
Macalimiinta laftooda Saaxiibka , Michael Brown, oo ka mid ah hiddaha iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada
Fursadaha fursadaha SEO
Le référencement est une stratégie de ligne muxuu muhiim u yahay xayawaanka iyo xayeysiinta ee macaamiisha ah ee xayeysiinta ah. Mid ka mid ah madaxbannaan, l'équipe numérique wuxuu u shaqeynayaa barnaamijka kubbada cagta SEO. Looga sheekeysto suuq geynta sawirada dijitaalka. Google, oo lagu daray munaurad weyn, sii wado dimoqraadiyada ku saabsan luuqada ku hadlaya luuqadaha kala duwan ee luuqadaha kala duwan. Hase yeeshee, waa muhiim in la helo masuuliyado muhiim ah oo ay ka mid yihiin sheyga iyo macaamiishu inay ka qayb galaan shuruudaha ku haboon ee ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan.
La soco faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qoraallada iyo dareenka sawirada dance le processus de référencement. Laga soo bilaabo barta casriga ah ee duulimaadyada dansiga ah (Facebook, WhatsApp iyo Instagram)..Waad ka qaybgashaa si aad u heshid barnaamijka SEO iyo sirta cibaadada qaniisiinta. La qabsashada qaabka aad u shaqeyneyso si aad u isticmaashid adigoo adeegsanaya tifaftirka waxqabadka. Naqshadeynta wuxuu u shaqeynayaa dadka ka faa'iideysta khadka adeegga iyo kharashka macaamiisha ah ee ku habboon ee loo baahan yahay in lagu xoojiyo macaamiisha iyo macaamiisha.
Laylisyada iyo shaqooyinka macaamiishu waxay ka faa'iidaystaan ​​isticmaalka macaamiisha ee ku saabsan macaamiisha. Dareemayaasha caanaha ah ee ka faa'iideysanaya macaamiishu waxay ku shubayaan macaamiisha ganacsiyada. Laga soo bilaabo taariikhda cusub ee dib u soo celinta qiimaha iyo qiimaha macmiilaha iyo kuwa macaamiisha ah ee isticmaala macaamiisha. Luqadku waxay u gudbineysaa shahaadada ra'yiyeynta ku salaysan liiska iyo suuqgeynta waxqabadka iyo wacyigelinta.
La qabsashada dareenka dimoqraadiyada, adoo adeegsanaya shabakada internetka, adoo adeegsanaya ficilada, lafa-qabashada iyo la-qabsashada macaamiisha iyo macaamiisha macaamiisha. Inta ugu horeysa ee aad u daalacday, waxaad ku dhiiri gelineysaa in aad iibiso qayb ka mid ah. Laga soo bilaabo qeyb ka mid ah sawirada l'images iyo in laysku daray, si toos ah si toos ah virale
Vendre des produits iyo ganacsiyada adeegyada
Le Contenu vidéo est un avil effecace de marketing et de vente. Utiliser des vidéos ku soo dhawow faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ganacsiyada iyo ganacsiyada si aad u qadarin kartid. Suuqgeynta xeeldheer waxay ka kooban tahay qadarin ku salaysan ficilada ficilada ficilada. Nidaamyada loo yaqaan 'les les portes' ayaa ku haboon in la sameeyo qiyaasta nafaqada ah ee 20% oo ka mid ah daawada loo yaqaan 'non-nourris'. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan saameynta iyo faa iidada ku darso shahaadadaada. Tusaale ahaan, oo ka mid ah waxyaabha ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan oo ku saabsan macaamiisha ay ka mid yihiin calaamadaha macaamiisha
La vidéo ayaa ah nooca aad u fiican, oo ku salaysan qaybo badan. Maqaalkani waa mid muhiim ah oo ka faa'iideysanaya ficilada loo yaqaan "vidéos pour la vente et de développement de plomb. Kusoo darsi diyaarso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan suuq-geynta iyo suuq-geynta qiimeeynta suuqyada ganacsiga